သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခဲ့သော ဘင်္ဂလီများအား ထိရောက်စွာအရေးယူရန်လို | ngalone
HomeNgaloneArakanHistory of Arakanရခိုင်ဆိုသည်မှာစာအုပ်စင်ရခိုင်စာအုပ်မြန်မာစာအုပ်နိုင်ငံရေးစာအုပ်ဥပဒေရေးရာစာအုပ်သတင်းPhotoစိုင်းတင်ဓါတ်ပုံချေတိဘူးသီးတောင်ဓါတ်ပုံချေတိဘူးသီးတောင်မြို့ဒုံးပွဲ ဓါတ်ပုံတိဝက်ကျိန်းဘုရားဓါတ်ပုံချေတိမြောက်ဦးဘုရားပုံများဘူးသီးတောင်မြို့ အစွန်ဆုံး တောင်ပေါ်အလှတရားများ(ဓါတ်ပုံ)ရခိုင်ဝက်ဆိုဒ်လမ်းညွှန်Arakan Video/Music
← ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီကျူးကျော်အိမ်များ ရွာများ မြို့နယ်အဝှမ်း တိုးပွားလာနေ
မူးယစ်ယမ်းကားပြီး မိန်းမပျိုတစ်ဦအား ရိုက်နှက်သူ စစ်သားတစ်ဦးအား အရေးယူ‌ပေးရန်‌ ‌တောင်းဆိုမှု ဖြစ်‌ပွားခဲ့ →
သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခဲ့သော ဘင်္ဂလီများအား ထိရောက်စွာအရေးယူရန်လို
ပြည်လုံးကျွတ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုကို
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဘင်္ဂါလီများသည် ဖျက်လိုဖျက်စီး တမင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့်
ကမ္ဘာတွင်မရှိသည့်လူမျိုးအမည်ကို လိမ်လည်ထွက်ဆိုခဲ့ကြ၍ သန်းခေါင်စာရင်း
ကောက်ယူမှု အောင်မြင်မှုမရှိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် ၂၀၁၃
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ
ဥပဒေအမှတ်(၁၉)ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ
သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်
ကျူးလွန်သူများဖြစ်၍ နိုင်ငံတော်မှဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုအရေးယူရန်
လိုအပ်နေသည်။ အဆိုပါ ဥပဒေတွင် ဤသို့ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း ပုဒ်မ(၁၂)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် “စာရင်းကောက်က
သတ်မှတ်ထားသောဒေသတွင်းရှိ ပြည်သူများအား သတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်းများ
စာရင်းပုံစံများတွင် မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်”
ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်။၎င်းအပြင် အခန်း(၅) တားမြစ်ချက်များ၊ ပုဒ်မ(၁၆)၊
ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် “ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ
မေးမြန်းသောမေးခွန်းများဖြေဆိုရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်းပုံစံတွင်
သိုမဟုတ် မှားယွင်းစွာ ဖြည့်သွင်းခြင်း မပြုရ ” ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ၎င်းပြင်
အခန်း(၆) ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ၊ ပုဒ်မ ၁၉ တွင် “မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၄၊
ပုဒ်မ ၁၅ နှင့် ပုဒ်မ ၁၆ ပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို
ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို
တစ်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ
ဘင်္ဂါလီများသည် အဆိုပါဥပဒေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
ချိုးဖောက်ကျူးလွန်သူများဖြစ်ရာ ဤဥပဒေဖြင့် အရေးယူအပြစ်ပေးရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည် လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုးဥပဒေများသာ ဖြစ်သည်ဟု
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Like this:Like Loading...
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီကျူးကျော်အိမ်များ ရွာများ မြို့နယ်အဝှမ်း တိုးပွားလာနေ
ပြောချင်စွာတိရှိကေ ဒေမှာထားခပါ Cancel reply	Enter your comment here...
ဘူးတောင်သားငလုံး	ARAKAN LAND
ရခိုင်နဲ့ မြန်မာသတင်းတိကို Android ကနီဖတ်ဖို့ အတွက် ငလုံးရခိုင်သတင်းစုစည်းမှု APK Version(3.0.1)(Download)
email လိပ်စာရိုက်ထည့်ပေးပြီး Ok ကိုနှိပ်ပေးပါ
လူကြိုက်အများဆုံးပိုစ့်	သံတမန်များနှင့် တွေ့ဆုံသည့် လူအုပ်ထဲမှ အကြမ်းဖက်သမား သုံးဦးအား ဖမ်းမိခဲ့သော်လည်း သံတမန်များလိုလားဟန်မရှိ၍ ချက်ချင်း ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရ	မောင်တောနယ်ခြားစောင့်တပ် ကွပ်ကဲရေးမှူးဟောင်းကို အရေးယူရန် အကျယ်ချုပ်ချ	ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှတွင် ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၁၅ ကျောင်းနှင့် အိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ထက်မနည်း တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခံရ	အကြမ်းဖက်သမားများ ယူဆောင်သွားသည့် လက်နက်များအနက် သေနတ် ၁၈ လက်နှင့် ကျည်ဆန် ၃၀၀၀ ကျော် သိမ်းဆည်းရမိပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်ပြောကြား	ရခိုင်စာအုပ်	ရခိုင်နဲ့ မြန်မာ သတင်းတိကို စုံစုံလင်လင်ဖတ်နိုင်ဖို့ ngalone.apk	Conputer ကိုပိုမို မြန် ဆန်စေရန်	မှော်ရုံတောမှာမောလှပြီ-မြသန်းတင့်	သုည-မင်းခိုက်စိုးစံ(စာအုပ်)	ရခိုင်ဝက်ဆိုဒ်လမ်းညွှန်	Take Our Poll
စာမူပို့ ရန် ငလုံး ဘလော့ တွင် စာမူများ ပေးပို့ လိုလျှင်ngalone.arakan@gmail.comသို့ ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
အမျိုးအစားလိုက်ရှာဖွေရန်ngalone for android
အသုံးဝင်တဲ့ software လေးများ
နိုင်ငံရေးစာအုပ်	နောက်ဆုံးတင် ပိုစ့်များ	ကိုလိုနီဆိုးမွေခံရခိုင်ပြည်နှင့် စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂလီမူဆလင်တို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ရေးထကြွမှု-ဆရာခိုင်မျိုးစောင့်
မောင်တောနယ်ခြားစောင့်တပ် ကွပ်ကဲရေးမှူးဟောင်းကို အရေးယူရန် အကျယ်ချုပ်ချ
မောင်တော မြို့နယ်၊ ဝါးပိတ် ကျေးရွာ၏ ခြံဝင်းတစ်ခုအတွင်းမှ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ တူးဖော်ရရှိ
မောင်တောတောင်ပိုင်း နူရ်ရူလာရဲကင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှု ရဲတစ်ဦးကျ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
သံတမန်များနှင့် တွေ့ဆုံသည့် လူအုပ်ထဲမှ အကြမ်းဖက်သမား သုံးဦးအား ဖမ်းမိခဲ့သော်လည်း သံတမန်များလိုလားဟန်မရှိ၍ ချက်ချင်း ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရ
မောင်တောတွင် အလုံပိတ်ထားသည့် ခြံစည်းရိုးများကို လုံခြုံရေးအရ ဖယ်ရှား
အကြမ်းဖက်သမားများ ယူဆောင်သွားသည့် လက်နက်များအနက် သေနတ် ၁၈ လက်နှင့် ကျည်ဆန် ၃၀၀၀ ကျော် သိမ်းဆည်းရမိပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်ပြောကြား
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှတွင် ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၁၅ ကျောင်းနှင့် အိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ထက်မနည်း တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခံရ
မောင်တောနယ်စပ် အစွန်အဖျား ကျေးရွာများတွင် ဆရာမများအစား ဆရာများဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာများကို အခြေခံစစ်ပညာ သင်ပေးမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦး မောင်တောတောင်ပိုင်းတွင် တန်စိုးလက်ဆောင်များ လက်ခံမှုများရှိနေဟုဆို
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို အကြောင်းပြ၍ ဘင်္ဂါလီအချို့ တစ်ဖက်နိုင်ငံ၌
UNHCR တည်း ဟူသော ထရိုဂျင် မြင်းရုပ်
"လွတ်လပ် သော ရခိုင်နိုင်ငံတော် ကြီးဆီသို့" Blog at WordPress.com.